Tokinao | Resaka mandalo
Mbola hiresaka politika tokoa ve?
Avy namaky ny lahatsoratr'i Jentilisa aho teo (izay mitondra ny lohateny hoe : Mbola Hiresaka Politika Ihany Ve?) , ka dia tafamaky indray ity tononkalon'i Rado ... izay zaraina ho antsika ity :
Madagasikara tena lomorina
Tsy dia mahita hosoratana ka dia ny lahatsoratra farany no novaina dia averina aseho. Ny fanovana "goavana" dia : tsy "Madagasikara lomorina" intsony ny lohateny fa "Madagasikara tena lomorina" :).
Tamin'ity herinandro faran'ny volana jolay ity dia nila nikarakara "taratasy" teny amin'ny ministera iray aho. Tamin'ny talata aho no teny voalohany, koa dia nahazo ny toro marika rehetra, ny taratasy ilaina, sns , ary nasiany niverina omaly zoma (asabotsy 1 aogositra moa anio). Tamin'ny 8ora omaly ny fotoana nomeny, ary nasain'ilay tompon'andraikitra tonga alohaloha satria ho betsaka hono ny filaharana.
Koa dia tonga aho tamin'ny 7ora, tamin'izay anefa dia efa ho maromaro izahay no tao. "Tsy maninona" hoy aho tany an-tsaiko satria tiako ho faranana anio ilay taratasy amboariko. Koa dia nilahatra ampilaminana izahay.
Niandry ka niandry ... Tamin'ny 8ora sasany no tonga ny tompon'andraikitra. Nihabetsaka hatrany izahay
Niandry ka niandry ... Tamin'ny 8ora 30 teo ho eo no nisy olona nizara nomerao. Mba faly kely aho satria heveriko ho afaka miala kely aho rehefa avy nahazo nomerao, ary miverina rehefa akaiky ho anjarako ny miditra ao amin'ilay birao. Mba nampahery kely ny tenako aloha ny fisian'io fomba fitantanana mahafinaritra io, na dia tsy mba am-panajàna tanteraka aza ny nizàrana izany nomerao izany. Sanatrian'izany ... toy ny mizara taolana amin'ny alika ny fomba nanomezan'ilay rangahy motomototra ny nomeraonay : "'ty" "ty ny anao", sns...
Niandry ka niandry ... Tamin'ny 9ora mahery kely vao nanomboka nandray olona ilay tompon'andraikitra. Amin'io dia efa feno be ny efitra fiandrasana (salle d'attente), ny marimarina kokoa dia làlan-tsara fiandrasana. Feno olona ny manodidina ahy : aloha, sy aoriana, ankavia sy ankavanana ... toy ireny hifanisika hiakatra fiara fitanteram-bahoaka ireny. Fa izahay koa aloha tsy mifanosika satria mila ho in-1 isaky ny antsasak'adiny vao misy olona iray ampandrosoana ao amin'ity "fiara fitateram-bahoakanay" ity : laozan'ilay tompon'andraikitra mihodina ankavia sy ankavanana foana. Ny mahagaga ahy dia betsaka ireo namany manana birao eo akaikiny no tsy manao n'inon'inona akory nefa tsy mba manampy azy : ny sasany moa dia mahavita mivoaka matetika satria hifoka sigara, sady leon'ny mijery olona milahatra koa angamba.
Niandry ka niandry ... tonga ny amin'ny 12 ora dia noteneniny izahay fa hihidy kely aloha satria hisakafo, ary hisokatra amin'ny 2ora. Ny hakiviako amin'io efa tsy haiko intsony ny mitantara azy. Efa adin'ny 5 manko aho no nijoro teo. Betsaka koa moa no tsy nahandry dia nandeha, ka faly kely aho isaky ny misy mandeha satria mihavitsy 'zany izahay. Nefa izao dia tsy maintsy hiala kely indray.
Dia nanao kibo an-tsena aloha, satria ny toerana fodiako dia alavidavitra ihany, sahabo ho 10km miala eo Anosy, izany hoe adiny iray raha mitaingina fitanteram-bahoaka.
Tonga ny folakandro dia tafaverina indray ireo mpilahatra : dia ny tamin'ny maraina sy olona vaovao hafa maro be koa, olona nahazo fotoana (rdv) ny folakandro hono.
Dia niandry ka niandry hatrany. Mihamifanetiety hatrany izahay, satria tsy maintsy tazomina ny filaharana eo an-dalan-tsara (izay tsy hitako intsony izay maha filaharana azy). Ilay nomerao nozaraina koa manko toa tsy nampiasain'ilay tomponandraikitra intsony koa, ka izay tandrify ny varavarana dia ampidiriny. Izy amin'io dia misinda matetika any amin'ny biraon'ny namanay any : mety vizaka angamba na koa leo mandray olona.
Fa izany rehetra izany eo ihany fa ny tena tsy laitrako dia ny mahita olona mangata-dàlana aminay mba hiditra. Tamin'ny voalohany, dia tsy nomenay làlana satria tsy adala izahay milahatra eo. Rehefa hitan'ilay tompon'andraikitra anefa ilay olona mangata-dàlana dia "avelao izy handroso" hoy izy. Ny teny ratsy sisa no tsy mivoaka aminay mpilahatra.
Maromaro ny olona tonga dia nahazo niditra toy izany : ao ny zanaka karana, ao ny olona hita fa ho tsaratsara akanjo sy mihaja.
Marary mihitsy ny foko mahita ireo.
- "Andao ho'ahy isika tsy hanaiky izao zavatra izao" ho aho tamin'ireo mpilahatra namako.
- "Aoka ho izao ihany" hoy ilay iray izay. Voa maika tsy ho vita eo ny taratasintsika raha manao izany hoy izy. Ny sasany mody tsy maheno ahy daholo, na dia marary fo aza isaky ny mahita olona tsy nilahatra nefa tonga dia miditra. Betsaka taminay nilahatra teo no hitako ho olona tsotsotra (ratsy akanjo, sy toa avy any ambanivohitra koa aza).
Ny niafarako moa dia voaray ihany, efa ho tamin'ny 4ora hariva tany ho any. Tena olona tsy mahalala fomba ilay lehilahy tompon'andraikitra : na ny "arahaba" aza tsy ataony fa dia "inona ny anao?", "ny anarana?", sns fotsiny hoy izy sady mikitakita izy. Nanokatra "tiroir" kely izy dia navoakany avy tao ny taratasiko. Dia izay monja dia vita. Tsy misy "veloma" koa fa dia "ny manaraka" ho izy toa sady mandroaka.
Kivy aho. Marihiko fa tamin'ny fiantomboan'ny herinandro dia nisy namako izay efa nilazako fa hanao io taratasy io aho ; ary dia hoy izy : "miasa ao i dadatoanay, sao dia tianao ny hampifandraisako anareo?". Tonga dia azoko ny ny tiany ho tenenina. Toa niteny tamiko izy hoe : sarotra be ny manao zavatra ao amin'io ministera io, fa miresaha amin'i dadatoanay, dia mba omeo kely koa izy mazava ho azy.
"Aoka ho izao ihany" moa ny valin-teniko. Zavatra tsy tiako mihitsy izany manao risoriso izany.
Eto anefa dia iharan'ny risoriso ataon'ny hafa aho. Ka dia kivy sy lasa eritreritra :
Tena tsy misy dikany intsony ny maha malagasy ny olona maro : sady efa mahantra ara-materialy no mbola mahantra ara-panahy sy ara-tsaina koa. Raha mba mahantra ara-materialy fotsiny moa haninona : mbola mety ho eo ny haja sy rehareha fa tsy mbola mpangataka na koa mpangalatra. Fa ankehitriny dia simba sy lomorina tanteraka ny maha-olona azy. Ary dia ny gasy samy gasy no mifamely, sy mifamono.
Tsy mahagaga ahy mihitsy ny hanambanian'ny vazaha sasany antsika : na samy isika aza tsy mahay mifanaja. Izany tsy fahaizantsika miara-miaina izany koa moa dia manamora ny fanambaniana sy fanandevozan'ny vazaha antsika. Koa aza gaga mihitsy ianareo rehefa tsy asian'ny vazaha sira rehefa mila zavatra aminy.
Ka dia miala tsiny aminao aho raha hiteny fa : tsy mirehareha intsony amin'ny mahagasy ahy. Tsy hitako intsony izay ilàna ny toe-tsaina malagasy. Tena tsy hipetraka eto Madagasikara aho. Taloha aho rehefa miteny hoe "andeha hody, dia ny ao Madagasikara izay ny ao an-doha, fa ankehitriny dia ny tranoko any an-dafy no tena tranoko". Fialan-tsasatra ihany no tsara atao ao Madagasikara, ary fadio ny mikarakara taratasy raha tsy te hanimbasimba foana ny fialan-tsasatra.
Manomboka anio dia tsy gasy intsony aho. Aleoko ny zom-pirenena maha-vazaha ahy no asehoko olona. Ny gasy dia "sauvage", tsy mahalala fomba intsony koa : na ny arahaba aza tsy hain'ny mpitàna birao sy ny mpivarotra intsony.
Koa ny hafatro aminao izay any an-dafy dia ny hoe : "tena tsy misy fanafana intsony i dago! ... satria ny vahoaka mihitsy no lomorina toe-tsaina. Na ho i Obama, na ho iza na ho iza no ho filoha dia tsy hisy raharaha ho vanona eo. Adabohy izany tetik'asanao eto Madagasikara izany satria efa simba ny fomba fihariana eto. Tsy maintsy manao risoriso ianao amin'ny ambaratonga rehetra vao mahavita zavatra. Koa raha tsy kinga amin'ny fanaovana risoriso dia ho maty antoka fotsiny, eny fa na dia tsara paika aza ny tetik'asa. Ho lany fotoana arirariran'ny birao fotsiny ianao, arirarirany amin'ny lalàna izay tsy ampihariny intsony akory.
Ny hafatro aminao eto Madagasikara kosa dia ny hoe : "Tena ataovy izay hialàna eto. Ozinina famonoan'olona sisa i Madagasikara : famonoana ara-batana à "long terme", ary koa famonoana fanahy. Raha tafiditra ao amin'io ozinina io dia tsy maintsy manaraka ny kodiara "engrénage" ao raha tsy izany dia "maty haingana". Koa ataovy izay ivoahana : na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana.
A partir d'aujourd'hui, je ne reconnais plus mon pays. Car je deteste la corruption
Tapitra ny fitantaràna . Io nosoratako volomparasy io no zavatra notantarain'ny namako iray ahy vao omaly zoma hariva. Dia tanteriko eto koa. Anjaranao ankehitriny ny mitsara azy sy ny fomba fijeriny. Aza maika miaro, sy manadio tena fa diniho hoe : inona amin'ny noteneniny no marina sy zava-misy tokoa.
Misaotra anareo namaky i Tokinao.
PS: tsikaritrareo fa gasy manao fialan-tsasatra ao Madagasikara io olona nitantara tamiko io. Ny nambarako azy moa dia ny hoe : tsy vao izao no misy ireo zava-misy ireo ao Madagasikara, sy ny hoe : aza tsaraina loatra amin'ny fiainan'ny eny andrenivohitra ny momba ny malagasy rehetra.
# Posted by tokinao :: Resaka mandalo:: Hametraka hevitra (27) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Nofinofy revirevy I : ny zanako :).
Mba tsy hampiakatrakatra ny tosi-drà amin'ny tsy antony amin'izao zava-manjo ny firenena izao dia tapa-kevitra aho ny hieritreritra zavatra hafa mihitsy :). Asa ... nofinofy ihany ve sa vinavina mba ho azo tanterahina. Miankina amin'ny fitantanan'Ilay Nahary daholo manko ny zava-drehetra.
Vinavina (sa nofinofy ) voalohany : Rehefa manan-janaka aho any aoriana any dia izao no eritreretiko hitaizàna azy [aza ihomehezana e ]:
- fomba fitaiza amin'ny alalan'ny fanomezan'andraikitra : satria ho zariko omena andraikitra izy raha vao manomboka ho lehibebe ka mahatsiaro tena. Miainga amin'ny fiainana keliny amin'ny andavanandro izany. Ohatra : rehefa avy milalao dia tsy maintsy alamina ny kilalao, rehefa avy misakafo dia izy ihany no mandroaka ny ota navelany, sns. Arakaraky ny taonan'ny ankizy koa dia ampanaovina raharaha sahaza azy izy, ary ampiharina amin'ny ankizy rehetra ao an-trano io. Rehefa feno 8 taona ohatra dia tokony handamina lovia isan'andro. Rehefa zokinjokiny kokoa indray dia asaina manadio trano sy ny sisa. Marihiko fa mitovy ny lahy sy ny vavy ao an-trano : rehefa anjaran'ny vehivavy ohatra ny manao zaridaina dia tokony handray angady izy, ary rehefa andraikitry ny lahy ny manasa lamba sy mipasoka dia tsisy an-kitaraina eo. Tsy ferako kosa ny fifanarahana satria tokony ho tsapany fa ilaina ny izany, sy ny fizaràna andraikitra araky ny manavanana ny tsirairay avy.
Ny tena tanjona amin'izay fanomezan'andraikitra izany moa dia ny hizàrana an-dry zareo hanara-dalàna eo amin'ny fiaraha-monina, mba ho tompon'andraikitra amin'izay atao, ary mba hahaleo tena. Antenaiko fa ahafahana misoroka ny toetran'ankizy "mihanta", sy "miankin-doha" amin'ny ray aman-dreniny io fomba fitaizàna io.
- fomba fitaiza hentitra : Rehefa nanome toky ny ankizy iray fa hanao raharaha iray dia tokony ho vitainy izany. Rehefa ifanarahana aminy fa tokony hody ao an-trano izy amin'ny ora voatondro iray dia tokony harahiny izany. Ny famitahana sy ny tsy fanarahan'anatra dia toetra tsy azo leferina velively, fa dia sazy no sahaza izany. Isan-tsokajiny ny sazy omena ny ankizy tsirairay arakaraka ny taonany sy ny fahatsiarovany tena. Raha ankizy eo ho eo amin'ny 2 na 3 taona ohatra no mianatry ny miteny ratsy dia ny kapoka kely no sazy sahaza. Tsy mbola mandray anatra am-bava loatra manko izy. Na izany aza anefa, ny kapoka dia tsy natao hampaharary fa ho endrika (symbolique) fotsiny. Ny manambitamby zaza avy nanao fahadisoana sy avy nokapohina moa dia fadïna, satria io no fomba fampihantàna zaza mahomby indrindra.
"Ny tahotra no voaloham-pahendrena" hoy ny baiboly sy ny fahendrena malagasy ... koa aza mitsitsy rotsa-kazo raha tianao hanam-pahendrena ny zanakao.
- am-pitiavana anefa : ireo fomba fitaiza voalaza etsy ambony moa dia "vokatry" ny fitiavana ary "atao am-pitiavana" hatrany. "Vokatry ny fitiavana" daholo ; eny fa ny sazy sy ny kapoka. Tiana izy ka tsy avela hivily ho amin'ny lalàn-dratsy. "Amim-pitiavana" koa fa tsy an-katezerana : tsy asïko resa-be satria inoako fa ananan'ny ray aman-dreny ho azy (tsy novolena) izany fitiavan-janaka izany.
- Ny ho fialamboliny ve : maro ankehitriny ireo zava-manintona ny ankizy, raha tsy hilaza afa-tsy izay hitantsika any an-dàlana rehefa fotoanan'ny noely : dia ny kilalao maro isan-karazany sy isan-tsokajiny. Na eo aza anefa ireo rehetra ireo, dia ireto ny ahy no kilalao sy fialam-boly hitako ho idealy :
# lalao mampiasa vatana, izay mahafaoka koa ny fanatanjahan-tena. Ankoatran'ny fampiasam-batana dia mitaiza ny saina izy io : ka hisy ohatra izany tsony!!! Ny fampiasam-batana dia ilain'ny ankizy fatratra (sy ny olombelona rehetra amin'ny ankapobeny) noho ny vatany mbola eo am-pitomboana tsara. Izany koa dia miaro azy mba ho salama lalandava : mandritra ny fahazazany sy mba tsy hanany areti-mitaiza rahatrizay. Ny ankabeazan'ny areti-mitaiza mantsy dia vokatry ny fahazaran-dratsy fony faha-tanora : fifohana sigara na zava-mahadomelina, fisotroana alikaola, tsy fihetsiketsehan'ny vatana, fahazarana mihinanana sakafo miteraka aretina, sns. Koa ny fampiasam-bantana dia fanafody sy fanefitra lehibe hialàna amin'ireo. Ankoatran'ireo moa dia tsy laviko fa eo koa ny areti-mitaiza manaranaka, sy ny areti-mitaiza mpahazo tsotra izao (tsy misy hoe nahoana). Hiverina amin'ny lohahevitra aho, dia ilay fampiasam-batana : betsaka ny lisitra raha hotanisaina : satria miainga amin'ny fanenjika, hazakazaka, sabaka, ka miafara amin'ny lomano, karaté :).. Tsy amporisihiko loatra kosa anefa izy ireo hanao "baodybaoldinina" satria fampijaliana ny vatana indray ireny amiko (mba hampihomehy anao ny tanjoko teto).
## fialamboly mampivelatra talenta. Ny tiako lazaina eto dia ny lalao izay, raha ampiroboroboina, dia hanjary talenta sy asa fiveloman'ilay ankizy (eny fa na dia hanome antoka ny ampahan'ny vola hiditra fotsiny aza). Ny ohatra ve hoy ianareo :
>ny fanaovana mozika : afaka ampiroboroboina dieny mahakely azy io amin'ny alalan'ny fanomezana azy zava-maneno faran'izay tsotra : kiririoka (sifflet), kabaosy, gitara gasy (6.000Ar io dia mahazo any amin'ny faritry Betsileo izay be hazo) sns... Tsara ampianarina hirahira koa ny ankizy mba hamantarana sao talentany koa izany. Izany fiainana tia hira izany koa moa dia ho "ampinga" lehibe eo amin'ny fiainany raha toa ka sendra fahasahiranana ny fiainany any aoriana.
>> ny zava-kanto hafa : toy ny fanaovan-tsary (na hosodoko io, na sary hitatra), ny fikarakarana tanimboly na zaridaina, ...
>>>ny fanaovan-tao zavatra : tsara ampanatrehana olona mpanao tao-zavatra ny ankizy raha mbola kely. Izany dia mety hampifoha ny talenta miafiny tsinona. Retsïka matetika eo amin'ny fiaraha-monina ny hoe olona nahazohazo taona (efa olon-dehibe) vao nahita fa hay misy zavatra manavanana azy kokoa. Ny antony dia satria tsy fantany (na koa tsy hitany) ny fisian'izany (na koa ny fahaizany izany) tamin'ny fahatanorany. Noho izany : dia tsara entina mamangy havana na olom-pantatra manan-talenta ny ankizy. Ohatra : olona mahay mandrafitra, manao sary sikotra, manao elektrônika, manefy, sns. Tsy terena izy anefa hanao izany fa tokony ho amin-tsitrapony : izay no maha-fialamboly ny fialamboly.
### Ny famakiam-boky : Vao miresaka boky dia ny tantara foronina no matetika ho ao an-tsain'ny maro. Tsy fahadisoana izany nefa koa tsy azo fintinina amin'ny tantara foronina ny boky. Maro ireo karazam-boky izay hitako ho tsaratsara kokoa noho ny tantara foronina (hevitro manokana io ka zonao ny hanakiana azy) : ny boky fianaran'asa, ny boky manampy eo amin'ny olana andavanandro [olan'ny tanora, olan'ny vehivavy, sns], ny boky ara-teknika (fanaovana brikôlazy, zaitra, sakafo, ...), ny boky ara-pianarana. Ireo dia azo ampiharina mivantana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ilay karazamboky kianiko etsy ambony kosa, na dia ahazoana misintona anatra aza (izay tsy laviko velively), dia mety hampanonofy koa, indrindra ho an'ny ny ankizivavy, raha diso tafahoatra.
Etsy andanin'ireo, dia tsara ezahina ampanalavirina ny ankizy ny fialamboly mampikombon-tsaina sy manasaraka azy amin'ny fiaraha-monina : dia itony ataon'ny tanora ankehitriny hoe : pilaisitasiônina , tsatitsaty, ary ny lalao harifomba lafo dia lafo nefa tsy mampivelatra akory. Ny fanomezana diso tafahoatra an'ireo lalao ireo ho an'ny ankizy dia sady hampikombona ny sainy, no mety hiteraka aretina ho azy [areti-maso, sns], ary mety hiteraka toetra mihanta sy zatra ampiadanina loatra koa : koa rehefa tonga ny andro tsy ahafahanao manome fahafaham-po azy dia tsy hahay hihonona izy ; ka na "hijaly" [frustré] izy, na hangalatra. Tsy manao be filaza aho fa tsy aleo ve maminavina ny ratsy mba hiavian'ny soa e. Ny fiainana manko haintsika ihany fa mivadibadika be ihany .
Aleo faranako amin'io ny resadresaka sy nofinofy androany . Izao tokoa angamba ny hoe : nofinofy ambony latabatra. Izay hevitry ny renin'ankizy tsinona tsy mbola hay, moa ny vola ho enti-mamelona an'izany ankizy izany koa tsy misy tokotaniny akory hihihi. Etsy ankilany : enga anie ka tsy ho momba RaTokinao . Raha sanatria moa ka izany dia efa "adie vô vasy kôsô kové" (adieu veau, vache, cochon, couvée).
Ireo fomba fijeriko ireo moa dia vokatry ny fandinihiko ny manodidina ahy, ary koa vokatry ny asa-soratra taoriam-pahalasàn'i Maurice Tièche (oeuvres posthumes de Maurice Tièche) izay hitako ho tena volamena tokoa satria tsy mba lany daty. Efa ho 5 na 6 taona izay no namakiako azy, nefa dia betsaka ireo fehezanteniny izay tsy miala ao an-dohako. Raha liana hikaroka izany boky izany ianao dia karohy any amin'ny fivarotam-boky tranainy :GUIDE PRATIQUE D'EDUCATION FAMILLIALE , L'EDUCATION PORTERA SES FRUITS, GUIDE PRATIQUE D EDUCATION FAMILLIALE
Isaorako mialoha ianareo izay hitondra fanakianana sy fanamarihana : na avy aminareo efa manan-janaka izany, na avy amin'ny tsy mbola. Asa ... mety ihany ve ry zareo ilay maminavina toy izao, sa dia izao tokoa no atao hoe manisy sira ny valala am-panidinana hihihi.
Araka ny maha "voalohany" ity revirevy ity moa dia kasaina havoaka amin'ny manaraka ny "revirevy faharoa".
# Posted by tokinao :: Resaka mandalo:: Hametraka hevitra (49) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)